सुरक्षा, सुरक्षा र बैंकिंग अफशो र गोपनीयता को गोपनीयता को गोपनीयता
अफशोर बैंकिंग सुरक्षा र सुरक्षा
अपतटीय बैंकिंग एक विचार मात्र धेरै धनी को लागी आरक्षित जस्तो लाग्छ। सत्य यो हो कि यो औसत व्यक्तिले विश्वास गरेको भन्दा धेरै सुरक्षित र सजिलो छ। त्यसोभए अफशोर बैंकि about्गको बारे के हो जसले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ? ठिक छ, जब तपाई उत्तरको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ तपाईले सोच्नुहुनेछ कि यो त्यति गाह्रो छैन। अफशोर बैंक खाताहरूले घरेलू बैंकि .मा धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। धेरै अपतटीय बैंकहरूले अधिक सुरक्षा, बृद्धि भएका गोपनीयता र अधिक वित्तीय स्वतन्त्रता र लचिलोपना घरेलू बैंकहरूको भन्दा प्रस्ताव गर्दछन्। यो सहयोगी संसाधनले तपाईंलाई केही सुझावहरू, संकेतहरू र यस अवसरमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
अफशोर बैंकि? भनेको के हो?
अफशोर बैंकि भनेको जस्तो देखिन्छ। यो एक डिपोजिटरी संस्थामा बैंकि .्ग हो जुन जम्माकर्ताको घरको बाहिर बाहिर स्थित छ। अफशोर बैंकि केवल सानो देशहरू जस्तै बेलिज, केम्यान र साइप्रसमा सीमित छैन। यसमा चीन र युरोपियन देशहरू सहित स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र बेल्जियमलगायत अन्य देशहरू पनि सामेल छन्। प्रत्येक देशको आफ्नै नियमहरु छन् कि कसरी आफ्नो बैंकहरु संचालन। तर अन्तमा तिनीहरू प्राय: समान चीजहरू हासिल गर्न थाल्छन्। यसले एक नियामक वातावरण समावेश गर्दछ जसले बैंकको सुरक्षा र सुरक्षा बीमा गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, तिनीहरूले नराम्रो मान्छेहरूलाई बाहिर राख्न मद्दतको लागि एक डिलिन्सन सिस्टम प्रयोग गर्छन्।
किन बैंक अफशोर?
त्यसोभए तपाईको घर बाहिरका बैंकि्गले तपाईलाई वास्तवमै कुनै पनि सुविधा प्रदान गर्दछ?
त्यस प्रश्नको उत्तर हो हो, एक अपतटीय बैंक खाता खोल्ने धेरै फाइदाहरू छन्। अफशोर बैंकि ofको एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा मूल्यवान लाभहरू मध्ये एक गोपनीयता हो। संयुक्त राज्यमा, उदाहरणका लागि, त्यहाँ सन् १ such .० को अमेरिकी बैंक गोपनीयता ऐन जस्ता कानूनहरू छन्। पछि युएसए प्याट्रियोट ऐन आयो। तिनीहरूले सबै घरेलु बैंक खाता धारकहरूको पहिचान गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछन्। यसले स्थानीय बैंकहरूमा बैंकि privacy गोपनीयतालाई लगभग अस्तित्वगत बनाउँदछ।
धेरै देशहरूमा अफशोर बैंकिंग नियमहरू, यसको विपरित, होल्ड गर्नुहोस् गोपनीयता सबै भन्दा बढी सम्मान मा आफ्नो खाता धारकहरु को। तसर्थ, धेरै न्यायालयहरुमा अफशोर बैंकहरु कुनै पनि तेस्रो पक्षहरु लाई खातावालाको पहिचान बदल्न कुनै दायित्व अन्तर्गत छैन। त्यहाँ केहि अपवादहरू छन्, पाठ्यक्रम जस्तै गम्भीर आपराधिक मामिलाहरू जस्तै आतंकवाद, तस्करी, वा मनी लान्डरिंग। अफशोर बैंकि inमा गोपनीयताको यो स्तर उद्योग स्तर मात्र होईन। तर धेरै देशहरुमा कानून छ कि खाताहरु को गोपनीयता र गोपनीयता जनादेश। यो ती मानिसहरुका लागि आदर्श हो जसको सम्पत्ति तिनीहरु नागरिक मुद्दा चलाउनबाट बचाउन चाहन्छन।
मुद्दा संरक्षणको लागि अफशोर बैंकिंग
२०० Bar मा अमेरिकन बार एसोसिएशनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मिलियन भन्दा बढी वकिलहरू थिए। यसबाहेक, सिभिल सूट १ 2006 12 -1993 -२००२ बाट १२% बढ्यो। आज, संयुक्त राज्य अमेरिका मा संसारका वकिलहरु को बहुमत छ। विशेष गरी, विश्वका lawyers०% वकिलहरू अमेरिकामा अभ्यास गर्छन्। योसँग यसको धेरै जसो मुद्दा पनि छ। वास्तबमा अमेरिकाको विश्वका मुद्दाको एक पूरै 96%% छ। तिनीहरू मध्ये धेरै प्रकृतिमा सानो देखिन्छन्। यसले तपाईंको सम्पत्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।
धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ, एक व्यर्थ मुद्दा, यो स्पष्ट रूपमा गलत छ भने पनि, गम्भीर व्यक्तिको आर्थिक कल्याण हानि गर्न सक्दछ। यो मुद्दा हो कि मुद्दा सफल छ वा छैन। मुद्दा चलाउनको लागि कानुनी फीस महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, मुद्दा चलाउनका लागि अक्सर त्यो मुद्दामा वादीलाई आर्थिक सम्झौता फ्याँक्न सस्तो हुन्छ। एक अफशोर बैंक खातामा आफ्नो सम्पत्ति राखेर तपाईं आफैलाई नराम्रो वकीलहरू र व्यर्थ मुकदमाबाट जोगाउँदै हुनुहुन्छ। यो किनभने तपाईका सम्पत्तिहरू तपाईको बस्ने ठाउँमा भन्दा भिन्न क्षेत्र क्षेत्रमा छन्। तर धेरै कडा गोपनीयता कानूनहरूले बैंकलाई नियन्त्रण गर्दछ।
तपाइँको के हो संरक्षण
सम्पत्ति सुरक्षा र गोपनीयता को स्तर जुन अफशोर बैंक खाताहरू प्रदान गर्दछ विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ। यो व्यवसाय मालिकहरूको लागि ठूलो सम्झौता हो जुन उनीहरूले कमाएको चीजहरूको रक्षा गर्न चाहन्छन्। त्यहाँ कडा बैंकिंग गोपनीयता र सम्पत्ति होल्डिंग कानुनी कार्यक्षेत्र अन्तर्गत संयोजन छ जुन पुग्न कठिन छ। यी दुई अवरोधहरु तपाइँ विरुद्ध मुद्दा चलाउन धेरै वकिलहरु निरुत्साहित हुनेछ। यो "payday बस्ती" प्राप्त गर्न अत्यधिक कठिनाई को कारणले हो।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि सम्पत्ति सुरक्षा केवल अफशोर बैंक खाताबाट प्राप्त गरिएको छैन। कारण यो छ। यदि तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा खाता होल्ड गर्नुहोस्, एक न्यायाधीशले तपाइँलाई तपाइँको अपतटीय खाताबाट रकम फिर्ता ल्याउन आदेश दिन सक्छ। यदि कालो पोशाकमा मान्छेले गेभललाई आदेश दिन्छ भने, उसले तपाईंलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्दछ।
के मुद्दा चलाउनबाट जोगाउनु तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छ? यदि त्यसो हो भने, लाइसेन्स प्राप्त ट्रस्टीसँग अफशोर सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्टमा खाता होल्डिंग आवश्यक छ। त्यो हो, तपाईंको ट्रस्ट भित्र फन्डाहरू समात्नुहोस्, एक इजाजतपत्र प्राप्त, बीमाकृत, सम्मानित ट्रस्टी द्वारा संरक्षित। यो किनभने जब तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ तपाईं टेबुलहरू मोड्नुहुन्छ। ट्रस्टी अपतटीयमा बस्ने। त्यसकारण, स्थानीय न्यायाधीशसँग विदेशी ट्रस्टीलाई पालना गर्न बाध्य पार्ने अधिकार क्षेत्र छैन।
त्यहाँ गोपनीयता बढेको साथ साथै फाइदाहरू छन्। अफशोर बैंक खाताहरूले स्वदेशी बैंक खाताहरू भन्दा स्वतन्त्रताको ठूलो डिग्री प्रदान गर्दछ। घरेलु खाताहरूले तपाईंलाई केही सम्पत्ति प्रबन्धन सेवाहरूमा संलग्न हुनबाट रोक्न सक्छ। तर धेरै अपतटीय बैंकहरूले यी आकर्षक र लाभदायक वित्तीय अवसरहरू खोल्न सक्छन्। त्यहाँका मुख्य कारणहरू हुन् जुन यी लगानीका अवसरहरू अफशोर बैंकहरू र उनीहरूका ग्राहकहरूको लागि उपलब्ध छन्। यो किनभने धेरै क्षेत्रहरुमा बैंकिंग मामिलाहरुमा सरकारको हस्तक्षेप एकदम कम छ।
एक अपतटीय बैंक खाता को माध्यम बाट तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कोष को उपयोग को फाइदाहरु को मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं विभिन्न मुद्रामा त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। प्लस तपाईं ती मुद्राहरूको लागि उत्तम विनिमय दरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एक अफशोर बैंक खाताको अधिकारले व्यवसाय अवसरहरू खोल्दछ जुन केही न्यायक्षेत्रमा उपलब्ध छैनन्। त्यसोभए अफशोर बैंकि्गले उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूमा सजिलो लगानीको लागि अनुमति दिन्छ। यसले प्रायः लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानीमा घरेलु हिसाबले प्राप्त गर्नेभन्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ। त्यहाँ केही अपतटीय बैंक खाताहरूमा थप लगानी र व्यापार अवसरहरू छन्। यो एक शेयर बजार पोर्टफोलियो र / वा बहुमूल्य धातु होल्डिंग शामेल हुन सक्छ। थप रूपमा, प्राय: त्यहाँ अधिक अनुकूल ब्याज दरहरू प्रस्ताव गर्दछन् जसले उनीहरूको खाता धारकहरूलाई प्रस्ताव गर्छन्।
के सुरक्षित छ? अमेरिकी बैंक वा अपतटीय बैंकहरू?
अर्को लाभ जुन अफशोर बैंक खाताबाट आउँदछ कि धेरै न्यायालयहरूमा बैंकहरू धेरै स्थिर छन्। अब मलाई थाहा छ कि तपाइँ अब के सोचिरहनुभएको छ: "यो कसरी सम्भव छ?" यस विषयमा स्पष्ट सत्य यो हो कि २०० 2008 र २०१२ बीचमा US 2012 अमेरिकी बैंकहरू असफल भए। यसबाहेक, ग्लोबल फाइनान्सको सबैभन्दा नयाँ वार्षिक गहन विश्लेषणले यसलाई फेला पारे। को विश्वको शीर्ष 50० सुरक्षित बैंकहरू केवल तीन ()) अमेरिकी बैंकहरूले सूची बनाए। शीर्ष 3० सुरक्षित बैंकहरूमा एक अमेरिकी बैंकसमेत थिएन। एउटा होइन। यस सूचीका अनुसार, विश्वका शीर्ष १० सुरक्षित बैंकहरू सबै यूरोपमा अवस्थित थिए।
अब यो भन्नु हुँदैन कि अमेरिकी बैंकि industry उद्योग प्रत्यारोपणको कगारमा छ। त्यो हो, आर्थिक मद्दत कुनाको वरिपरिको सहि जरूरी हुँदैन। यी तथ्या simply्कहरूले केवल देखाउँदछ कि त्यहाँ अफशोर देशहरू छन् जुन अमेरिका भन्दा बढी बैंकिंग स्थिरता प्रदान गर्दछ। यो प्राय: बैंकिंग नियमहरू मार्फत हुन्छ जसलाई बलियो ब्यालेन्स पानाहरू चाहिन्छ। यसका धेरैजसो संस्थाहरूले खातावालाहरूलाई उत्तम रिटर्न प्रस्ताव गर्छन् र विस्तृत लगानीको लागि प्रदान गर्दछन्। स्थिरताको यो स्तरले खातावालाहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिहरू विविधीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। यसले उनीहरूलाई ती सम्पत्तिहरूको राम्रो सुरक्षा गर्न र उनीहरूको वित्तीय गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्न अवसर दिन्छ।
अफशोर बैंकिंग सरलता
अन्तमा, धेरै व्यक्तिको विचार हुन्छ कि अफशोर बैंक खाता प्राप्त गर्नु लामो, कठिन र जटिल प्रक्रिया हो। उनीहरू सोच्दछन् कि यो केवल केहि लागि आरक्षित छ; तिनीहरूको लागि जो अपतटीय खाताहरू सेट अप गर्न उच्च मूल्यका वकिलहरू र शुल्क तिर्न सक्षम छन्। दशकौं अगाडि यो सही हुन सक्छ जब अफशोर बैंक खाताहरू स्थापना गर्न अत्यन्त गाह्रो थियो। थप रूपमा, तिनीहरू बैंक यात्रा गर्न आवश्यकता को कारण महँगो थियो। तर त्यसपछि डिजिटल युगको जन्म भयो र इन्टरनेटमा जडित कम्प्युटरहरूको प्रयोग भयो। त्यसो भए, आज अफशोर बैंक खाताहरू प्राप्त गर्न र अनुगमन गर्न को लागी घरेलू बैंक खाताहरू संचालन जत्तिकै सजिलो छ।
यस दिन र उमेर मा कुनै पनि वयस्क व्यक्ति एक अपतटीय बैंक खाता को लागी आवेदन गर्न सक्दछ। यो हाम्रो संगठनको रूपमा योग्य परिचयकर्तालाई सम्पर्क गर्ने साधारण कुरा हो। इन्टरनेटले अपतटीय बैंक खाताहरूको बहिष्करण हटायो। यसले यसरी वातावरण सिर्जना गरेको छ जहाँ कोही पनि लागू गर्न सक्दछ। केवल कुनै पनि व्यक्तिले वकिलहरुलाई अत्यधिक कानूनी र प्रसंस्करण शुल्क तिरेको बिना खाता कायम गर्न सक्दछ। यसबाहेक धेरै न्यायालयहरूमा अफशोर बैंकको स्थानमा यात्रा गर्न आवश्यक छैन। अफशोर बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू अब सबैको लागि अधिक पहुँचयोग्य छन्। त्यसकारण, अफशोर बैंक खाताको लागि आवेदन दिन र बेच्ने सुविधाहरू सोच्न यो धेरै सजिलो छ।
अफशोर बैंकिंग: के यो तपाइँको लागि हो?
अफशोर बैंक खाताहरू बितेका केही दशकहरूमा धेरै मिस्तिकले घेरिएका छन्। औसत व्यक्तिको विश्वास छ कि बैंकले यी सुविधाहरू केवल धनी व्यक्तिको लागि मात्र आरक्षित गर्दछ। त्यस्तै रूपमा, उनीहरूले बुझे कि सम्भावित लाभहरू सबै केवल अर्को मान्छेको लागि हो। त्यो एउटा विश्वास हो कि हामी खुसी छौं राज्य गर्न असत्य हो। तपाईका लागि पनि बेफाइदाहरू छन्।
गोपनीयता, सम्पत्ति संरक्षण, संस्थागत स्थिरता, र अफशोर बैंकिंगमा लचिलोपनाका फाइदाहरू सबैलाई उपलब्ध छन्। के तपाईं एक व्यवसाय मालिक हो जो आफ्नो व्यवसाय सम्पत्ति को रक्षा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं कोही हुनुहुन्छ जो विदेशी बजारमा आकर्षक लगानीको अवसरहरूमा प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने, धेरै सम्पत्ति सुरक्षा विशेषज्ञहरूले कडा सुझाव दिनुहुन्छ कि एक अफशोर बैंक खाता प्राप्त गर्न ध्यान दिएर।
अफशोर बैंकिंग गोपनीयता र सुरक्षा
बैंकिंग गोपनीयता र सुरक्षा प्रमुख चिन्ताको विषय हो। यो प्राथमिकता हो कि तपाईं र तपाईंको पैसा सुरक्षित हुनुहुन्छ। OffshoreCompany.com नियमित रूपमा केन्द्रीय बैंकिंग प्रणालीमा भाग लिने बैंकिंग संस्थानहरूलाई सिफारिस गर्दछ। प्रणाली अत्यधिक विनियमित छ। यसले कडा लेखांकन अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्दछ, जसले स्थानीय अपतटीय बैंकहरूको लागि बलियो संरचना र स्वतन्त्र निरीक्षण प्रदान गर्दछ।
धेरै संस्थाले अमेरिकी र विदेशी निगम र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुलाई सुरक्षित र निजी अपतटीय बैंकिंग खाता प्रदान गर्दछ। संस्थाले रोजगार प्रदान गर्दछ र स्थानीय अर्थव्यवस्था समर्थन गर्दछ। त्यो हो, तिनीहरूको अर्थव्यवस्था वित्तीय सेवा क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। नतिजाको रूपमा, गोपनीयता र वित्तीय सुरक्षा कानूनहरू लामो समयदेखि स्थायी र स्थिर छन्। यो महत्वपूर्ण छ कि सबै सम्भावित ग्राहकहरूले अधिकार क्षेत्रको सही छनौट गर्छन्। हामी धेरै शीर्ष अपतटीय बैंक खाता प्रदायकहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गर्छौं। यसका अतिरिक्त, हामी तपाईंलाई उपयुक्त छनौट गर्न सहयोगका लागि सहयोगी जानकारी प्रदान गर्नमा खुशी छौं।
केहि देशहरूमा अफशोर बैंकहरू अनिवार्य वित्तीय सुरक्षा बीमा प्रणालीहरूमा भाग लिन्छन्। तिनीहरू सुरक्षा र गोपनीयता धेरै गम्भीरतासाथ लिन्छन्। नियामकहरु कडाईका साथ लागू गर्छन् अफशोर बैंकिंग सुरक्षा। तिनीहरूले कडाईका साथ कानूनहरू लागू गर्छन्। त्यो हो, कानूनले विदेशी सरकारहरू सहित तेस्रो पक्षहरूसँग सूचना बैंकले साझेदारी गर्ने जानकारीलाई सीमित गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा, कानूनहरूले अपतटीय बैंक खाता प्रदायकहरूलाई गम्भीर आपराधिक कार्य वा आतंकवादको मामिलामा जानकारी साझा गर्न अनुमति दिन्छ। उनीहरूले बैंकिंग गोपनीयतालाई हल्का रूपमा लिदैनन्।
स्विस बैंकिंग गोपनीयता
उदाहरणका लागि स्विट्जरल्याण्डमा कानूनले ग्राहकको गोपनीयता उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई कडा सजाय दिन्छ। यसले कडा जरिवाना र जेल समय समावेश गर्दछ। त्यसो भए, तिनीहरूले निक्षेपकर्तालाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्। यो पनि महत्वपूर्ण छ कि विदेशी बैंकको आन्तरिक शाखा हुँदैन। यो किनभने शाखाले पैसा नखोल्दासम्म घरेलू शाखालाई जरिवाना लिन सकिन्छ। कुन बैंकसँग सुरक्षा, सुरक्षा, अनलाइन पहुँचको राम्रो संयोजन छ र खुल्ला रूपमा विदेशी ग्राहकहरूलाई स्वीकार्छ? त्यहि ठाउँमा यस जस्तो कम्पनी आउँछ। मद्दतका लागि यस पृष्ठमा नम्बर वा फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
यहाँ केही न्यायक्षेत्रहरू छन् जुन निजी बैंकिंग वित्तीय केन्द्रहरू हुन्:
च्यानल टापुहरू (जर्सी र गुर्न्से)
OffshoreCompany.com अफशोर बैंकहरूसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध विकास गरेको छ। हामी नियमित समीक्षा गर्दछौं, परिश्रम र व्यक्तिगत बैठकहरू। त्यसो गर्नाले सुनिश्चित गर्दछ कि अफशोर बैंक खाताहरू जुन हामीले ग्राहकलाई स्थापना गरौं मद्दत गर्दछ सुरक्षित र सुरक्षित छन्। अधिक जानकारी को लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा एक सुरक्षित अपतटीय बैंकमा खाता खोल्न।